သူမအပေါ် ဒါတွေလုပ်မိရင် မင်းတစ်နေ့ နောင်တရလိမ့်မယ် 💔 – Trend.com.mm
သူမအပေါ် ဒါတွေလုပ်မိရင် မင်းတစ်နေ့ နောင်တရလိမ့်မယ် 💔
Posted on July 16, 2018 by Wint
အားလုံး အဆုံးသတ်သွားပြီိလား ? တကယ်ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ ။ သူမ မင်းကို စကားမပြောတော့ဘူး။ ဖုန်းထဲမှာရော ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပါ မင်းတို့အတူတွဲရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။ မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ ဘလော့ ၊ အင်တာနက်မှာလည်း Unfriend တွေလုပ်လိုက်ပါပြီရဲ့။
အတိတ်က အတိတ်ပဲဆိုပေမယ့် အမှတ်တရတွေကတော့ သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာ လောင်မြိုက်နေတယ်။
ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးသွားမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားပေမယ့် ဒီလိုနေ့မျိုးရောက်လာခဲ့တယ်။ ငိုရတဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်လောက်မှမရှိပါဘူး။ သူမရဲ့အတွေးတွေထဲ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မင်းအကြောင်းတွေ လျော့နည်းလာမယ်။ မင်းကိုပြန်လိုချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာမယ်။ သူမရဲ့အနာဂတ်မှာ မင်းမပါလည်း နေတတ်သလောက်ဖြစ်နေပြီ။
မင်း သူမအပေါ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ပေးခဲတဲ့ ကတိတွေ ဖျက်ပစ်တယ်။ သူမလိုအပ်နေတဲ့အချိန်တွေ မင်းမရှိပေးခဲ့သလို ၊ တန်ဖိုးလည်း မထားခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက မင်းဟာ သူမအတွက် အရာအားလုံး ပြီးတော့ သူမရဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုဆိုလည်း မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းက သူမအတွက် အိပ်မက်ဆိုးတွေသာပေးနေခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ပြင်မရတဲ့ အကျင့်တွေကသူမကို စိတ်ပျက်အားလျော့စေခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ဘေးနားက တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားချိန်မှာ မင်းအလိုလိုနေရင်း သူမကို
သတိရလာမယ်။ ဆက်သွယ်ချင်လာမယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းနောက်ကျသွားပြီ။ သူမအတွက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေကို တစ်ဆင့်ချင်းကျော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ မင်းအကြောင်းတွေ သူမ အရင်လိုမတွေးဖြစ်တော့ဘူး။ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း မရှိ ၊ ဒီထက်ပိုပြီး နာကျင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ သင်ထက်ထားတာထက် သူမအများကြီး ကြံ့ခိုင်လာခဲ့တယ်။
မင်းကို နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီး ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အလွယ်လေးနဲ့ လက်လွှတ်
ခဲ့တယ်။ မင်းအတွက်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဒီတိုင်းရပ်ကြည့်နေခဲ့တယ်။
မင်းမရှိလည်း သူမ ပျော်နေတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ သူမအပြုံးတွေက ပိုပြီးလင်းလက်နေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တွေးမိတာက တစ်ချိန်က ငါ့ရဲ့မိန်းကလေးက သူဖြစ်ခဲ့ပါလား လို့ပေါ့။ သူမအပေါ်လုပ်ခဲ့မိတာအတွက် နောင်တရလာမယ်။ သူမကို နာကျင်စေမိတဲ့အတွက် သင်လည်း နာကျင်လာတယ်။
အခု သူမပျော်ရွှင်နေပြီး မင်း အထီးကျန်နေတယ်။ မင်းနောက်တစ်ယောက်နဲ့ အတူရှိနေရင်တောင်
မင်း စိတ်ထဲမပျော်ဘူး ဘာလို့လဲ.. မင်းအတွက် သူမတစ်ယောက်လုံးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို အခါခါ တွေးနေမိလို့ပဲ။ သူမအပေါ်လုပ်ခဲ့မိတာအတွက် မင်းနောင်တရလာမယ်။ မင်းရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက သူမကိုနာကျင်စေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီအတွက် မင်းတစ်သက်လုံး နောင်တရနေ
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူအပေါ် နာကျင်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။ အနားမှာရှိနေတုန်း တန်ဖိုးထားပါ။မရှိတော့မှ နောင်တရနေမယ့်အစား ခုချိန်မှာ တန်ဖိုးထားချစ်ပေးကြပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
က တကယ်ချစ်လို့ လက်တွဲခဲ့ကြတာပဲ။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေနဲ့ အားကုန်ခံ ရန်ဖြစ်မနေပဲ သည်းခံ နားလည် ခွင့်လွှတ်ရင်း ရွှေလက်မြဲမြဲ တွဲနိုင်ကြပါစေရှင် … 👫 💕
By : Shannon Soccocio
အားလုံး အဆုံးသတျသှားပွီိလား ? တကယျပွီးဆုံးသှားပွီပေါ့ ။ သူမ မငျးကို စကားမပွောတော့ဘူး။ ဖုနျးထဲမှာရော ၊ ဆိုရှယျမီဒီယာမှာပါ မငျးတို့အတူတှဲရိုကျတဲ့ ဓာတျပုံတှေ ဖကျြပဈလိုကျပွီ။ မငျးရဲ့ဖုနျးနံပါတျတှေ ဘလော့ ၊ အငျတာနကျမှာလညျး Unfriend တှလေုပျလိုကျပါပွီရဲ့။
အတိတျက အတိတျပဲဆိုပမေယျ့ အမှတျတရတှကေတော့ သူမရဲ့စိတျထဲမှာ လောငျမွိုကျနတေယျ။
ဘယျတော့မှ ပွီးဆုံးသှားမယျလို့ မမြှျောလငျ့ထားပမေယျ့ ဒီလိုနမြေို့းရောကျလာခဲ့တယျ။ ငိုရတဲ့အခြိနျဟာ ဘယျလောကျမှမရှိပါဘူး။ သူမရဲ့အတှေးတှထေဲ တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ မငျးအကွောငျးတှေ လြော့နညျးလာမယျ။ မငျးကိုပွနျလိုခငျြတဲ့ သူမရဲ့စိတျတှေ တဖွညျးဖွညျး လြော့နညျးလာမယျ။ သူမရဲ့အနာဂတျမှာ မငျးမပါလညျး နတေတျသလောကျဖွဈနပွေီ။
မငျး သူမအပျေါ ဘာတှလေုပျခဲ့လဲ ပွနျစဉျးစားမိတယျ။ ပေးခဲတဲ့ ကတိတှေ ဖကျြပဈတယျ။ သူမလိုအပျနတေဲ့အခြိနျတှေ မငျးမရှိပေးခဲ့သလို ၊ တနျဖိုးလညျး မထားခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက မငျးဟာ သူမအတှကျ အရာအားလုံး ပွီးတော့ သူမရဲ့ကမ်ဘာတဈခုဆိုလညျး မှနျတယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျးက သူမအတှကျ အိပျမကျဆိုးတှသောပေးနခေဲ့တယျ။ မငျးရဲ့ပွငျမရတဲ့ အကငျြ့တှကေသူမကို စိတျပကျြအားလြော့စခေဲ့တယျ။
ကိုယျ့ဘေးနားက တနျဖိုးရှိတဲ့လူတဈယောကျ ပြောကျဆုံးသှားခြိနျမှာ မငျးအလိုလိုနရေငျး သူမကို
သတိရလာမယျ။ ဆကျသှယျခငျြလာမယျ။ ဒါပမေယျ့ အရမျးနောကျကသြှားပွီ။ သူမအတှကျ အခကျခဲဆုံးအခြိနျတှကေို တဈဆငျ့ခငျြးကြျောဖွတျပွီးသှားပွီ။ မငျးအကွောငျးတှေ သူမ အရငျလိုမတှေးဖွဈတော့ဘူး။ မြှျောလငျ့ခကျြတှလေညျး မရှိ ၊ ဒီထကျပိုပွီး နာကငျြစရာလညျးမရှိတော့ဘူး။ သငျထကျထားတာထကျ သူမအမြားကွီး ကွံ့ခိုငျလာခဲ့တယျ။
မငျးကို နှလုံးသားတဈခုလုံးနဲ့ရငျးပွီး ခဈြတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျကို အလှယျလေးနဲ့ လကျလှတျ
ခဲ့တယျ။ မငျးအတှကျနဲ့ တိုကျခိုကျခဲ့တဲ့လူတဈယောကျကို ဒီတိုငျးရပျကွညျ့နခေဲ့တယျ။
မငျးမရှိလညျး သူမ ပြျောနတေယျ။ အခွားလူတဈယောကျရဲ့ရငျခှငျထဲမှာ သူမအပွုံးတှကေ ပိုပွီးလငျးလကျနခေဲ့တယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ တှေးမိတာက တဈခြိနျက ငါ့ရဲ့မိနျးကလေးက သူဖွဈခဲ့ပါလား လို့ပေါ့။ သူမအပျေါလုပျခဲ့မိတာအတှကျ နောငျတရလာမယျ။ သူမကို နာကငျြစမေိတဲ့အတှကျ သငျလညျး နာကငျြလာတယျ။
အခု သူမပြျောရှငျနပွေီး မငျး အထီးကနျြနတေယျ။ မငျးနောကျတဈယောကျနဲ့ အတူရှိနရေငျတောငျ
မငျး စိတျထဲမပြျောဘူး ဘာလို့လဲ.. မငျးအတှကျ သူမတဈယောကျလုံးရှိခဲ့တယျဆိုတာကို အခါခါ တှေးနမေိလို့ပဲ။ သူမအပျေါလုပျခဲ့မိတာအတှကျ မငျးနောငျတရလာမယျ။ မငျးရဲ့ခဈြတယျဆိုတဲ့ စကားက သူမကိုနာကငျြစခေဲ့တယျ။ နောကျဆုံးတော့ ဒီအတှကျ မငျးတဈသကျလုံး နောငျတရနေ
ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူအပျေါ နာကငျြအောငျ မလုပျပါနဲ့။ အနားမှာရှိနတေုနျး တနျဖိုးထားပါ။မရှိတော့မှ နောငျတရနမေယျ့အစား ခုခြိနျမှာ တနျဖိုးထားခဈြပေးကွပါ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ
က တကယျခဈြလို့ လကျတှဲခဲ့ကွတာပဲ။ ဘာမှမဟုတျတဲ့ ပွဿနာလေးတှနေဲ့ အားကုနျခံ ရနျဖွဈမနပေဲ သညျးခံ နားလညျ ခှငျ့လှတျရငျး ရှလေကျမွဲမွဲ တှဲနိုငျကွပါစရှေငျ …
ယောက်ျားလေးတွေသူတို့ရဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးကို ဖုံးကွယ်ထားတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာ…
🔥 ပရိတ်သတ်တွေကို နှလုံးသွေးရပ်တန့်မတတ် ပြုစားလိုက်ပြန်တဲ့ Hyuna 🔥